Naqshadaynta dhirta qoraxda leh ee AutoCAD Civil 3D - Geofumadas
Naqshadaynta dhirta qoraxda leh ee AutoCAD madaniga 3D
Maarso, 2009 AutoCAD-AutoDesk, Baridda CAD / GIS, tabo cusub
Shabakada internetka ayaa lagu dhawaaqay in ay ogaanayso codsiga ah ee Xeerka 3D ee AutoCAD ee dhirta qorraxda. Tani waxay noqon doontaa tan bisha 26 ee 2009 duhurnimo (12 saacadaha 13, wakhtiga Madrid ee aan u malaynayo) iyo content waxaa ka mid ah:
Abuurista Nidaamka Dhismaha Dijital ah (DTM).
Falanqaynta MDT iyada oo loo marayo hababka dhererka iyo isweydaarsiga.
Daabacaadda MDT si loo gaaro xaaladaha la rabo.
Dhaqdhaqaaqyada loo baahan yahay dhulka iyo natiijada kama dambaysta ah.
Isticmaalka podcast waxaa loo isticmaalaa si loo eego in waqtiga dhabta ah (ama ku dhowaad) ay suurtagal tahay in la arko bandhig, la tasho oo faallo ka baxsan xafiiska. Shirkadaha kale ee software ayaa badalay shirarka sanadlaha ah ee habkan; iyada oo lagu badbaadinayo kharashka, u oggolow dhagaystayaasha dhagaysta iyo fududahay kuwa runtii danaynaya oo aan ka qayb qaadan karin dhacdo fool-fool ah. Inkastoo xaddidaadda helitaanka adeegga broadband ay tahay dhibaato ay weli saameynayso dadka dhagaystayaasha ah; Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa inay fududahay in la xalliyo marka loo eego dhacdo caalami ah.
Si aad uga qayb qaadato, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad haysato lambarka taleefanka iyo gelitaanka internetka.
Post Previous«Previous Bentley ayaa bedeshay qaabka dhacdadeeda sanadlaha ah
Post Next Microstation V8i, shuruudahaNext »